Mirror, Arts And Crafts Factory Supplier-SHUNDA - 5pcs လအဆင့် စင် သစ်သား လစက်ဝန်း နံရံကပ်စင် ဧည့်ခန်း အိပ်ခန်း မုတ်ပါတီ လကြတ် နံရံအလှဆင် စင် OEM နှင့် စက်ရုံ | SHUNDA
5pcs လအဆင့် စင် သစ်သား လစက်ဝန်း နံရံကပ်စင် ဧည့်ခန်း အိပ်ခန်း မုတ်ပါတီ လကြတ် နံရံအလှဆင်စင်
MOQ သည် 1 အပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ စိတ်ကြိုက်မည်သည့်အရာကိုမဆိုကြိုဆိုပါသည်။ သစ်သားနံရံစင်
အနုပညာ၊ လက်မှုပညာနှင့် ဝါသနာပရောဂျက်များစွာအတွက် ပြီးပြည့်စုံသည်။ ပြီးပြည့်စုံသောလက်ဆောင်ကိုဖန်တီးပါ။
1. ပြီးပြည့်စုံသော Moon အစုံ - မင်းရဲ့ မူရင်း Gibbous Nimbus Moon Phase Shelf Set အစုံအလင် ၅ ပါး (လပြည့် ၁ ရက်၊ လခြမ်း ၂ နှင့် လဆုတ် ၂ လ)။
2.These Moon Phase Wall Hanging သည် လကိုနှစ်သက်သော မည်သည့်အခန်းအတွက်မဆို ပြီးပြည့်စုံသော အပြင်အဆင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်သော ဝိညာဉ်ရေးအိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
3. ဒါတွေကို သစ်သားနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး နံရံမှာ ချိတ်ထားဖို့ ကူညီပေးတဲ့ ပုံစံခွက်နဲ့ နံရံမှာ ချိတ်ဆွဲထားတာမို့ ဖြောင့်စင်းပါတယ်။
4.ကျယ်ဝန်းသောနေရာ – သင်၏ လအဆင့်စင် အပိုင်း ၅ ပိုင်းဖြင့် ထွက်လာပြီး အခြားသူများထက် ပိုကြီးပါသည်။၊ သင်သည် ဤ crystal display စင် အပြင်အဆင်တွင် ပုံဆောင်ခဲများနှင့် ကျောက်တုံးများကို ပိုမိုထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
5. သင့်အိမ်ကို အလှဆင်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်သော အလှဆင်မှုဖြစ်ပြီး သင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လှပသောတေးသံများကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
MOQ 1sets၊ မည်သည့်အနုပညာနှင့်လက်မှုပညာမဆိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်သည်ကြိုဆိုပါသည်။
ထုပ်ပိုးခြင်း။ တစ်ဦးချင်းစီသေတ္တာ + ပုံး
မော်ဒယ်- Moon Phase Wall Hanging
လုံးပတ်- ၂၇ စင်တီမီတာသာရှိသော လပြည့်သည် စက်ဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခြားစတိုင်လ်များ မကြာသေးမီက လူကြိုက်များသောပစ္စည်းများ
1.OEM&ODM၊ မည်သည့်စင်ကိုမဆို အရောင်၊ အရွယ်အစားဖြင့် စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်ပါသည်။
Shunda Home Decoration စက်ရုံသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖောက်သည်များအတွက် ထုတ်လုပ်မှု၊ ဒီဇိုင်း၊ အရောင်းနှင့် ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်သည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် သစ်သားလက်မှုပစ္စည်း ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည် လက်မှုပညာနှင့် လက်မှုပညာဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းတို့ကို အာရုံစိုက်ပါသည်။ သစ်သားစင်, သစ်သားသေတ္တာသစ်သားနောက်မှန်၊ စသည်တို့။ ရုံးအဆောက်အဦများ၊ စျေးဝယ်စင်တာများ၊ စူပါမားကတ်များ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ ဟိုတယ်ပရောဂျက်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုလျက်ရှိသော OEM နှင့် ODM လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
အရည်အသွေးမြင့်၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းထုတ်ကုန်များနှင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏မညှာမတာလိုက်စားမှုဖြစ်သည်။ ကုန်သေတ္တာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်းတွင် အတွေ့အကြုံကောင်းများရရှိနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ပါက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ဆန်းသစ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ကွဲပြားသောပုံစံများနှင့် တွေးခေါ်မြော်မြင်သောဝန်ဆောင်မှုဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုကို ရရှိထားပြီး၊ သင်၏သတင်းစကားကို စောင့်မျှော်လျက် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ကြိုဆိုပါသည်။
ယခင်- ဥရောပစတိုင်လ် ဒီဇိုင်းသစ် ကြေးဝါသတ္တုဖြင့် သစ်ကြားသီးသစ်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အထည်မီးခုံခုံတိုင် မီးခွက်နှင့် 3C လက်မှတ်ပါသော ကြမ်းပြင်မီးအိမ်
နောက်တစ်ခု: အနုပညာ၊ လက်မှုပညာ၊ ဝါသနာနှင့် အိမ်တွင်းသိုလှောင်မှုများအတွက် ပတ္တာအဖုံးနှင့် ရှေ့ချိတ်ပါရှိသော သစ်သားသေတ္တာကြီး
5pcs လအဆင့် စင်
5pcs set စင်
တြိဂံပုံသဏ္ဍာန် သစ်သားကြိုး နံရံဓာတ်ပုံပြကွက် H...
နံရံမှာ နှစ်ထပ်လမင်းစင် သစ်သားရေပေါ်...
လက်ကား သစ်သီးပန်းကန် သိုလှောင်ခြင်း တောင်းများ ပေးသွင်းရမည်...
အလှဆင်ထားသော နံရံတွင် တပ်ဆင်ထားသော လဝန်းမှန်...